डा.केसीको ११ औं अनशनको आज दश दिनः बरु मर्न तयार,माग पुरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता (भिडियोसहित हेर्नुहोस्)
समर्थकहरु पनि अनशनमाः हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन
प्रकासित मिति : २०७४ श्रावण १८, बुधबार प्रकासित समय : ०८:५९
काठमाडौं । झन्डै तीन दशकदेखि चिकित्सक भएर लाखौं टुटेफुटेका हडजोर्नी जोड्ने काममा देश, विदेश अनि मुलुकका कुना, कन्दर अनि बिकट गाउँ गाउँमा पुगेका हाडजोर्नी विशेष डा. गोविन्द केसी केही बर्षदेखि भने राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र माफियातन्त्र नामक समाजको खतरनाक रोगको निदानका लागि अथक परिश्रम गरिरहेका छन, उनी दश दिनदेखि अनशनमा रहेका छन ।
उनी त्यस्तो डाक्टर बनेका छन, जहाँ समाज सुधारको खाँचो पर्यो त्यहीं पुग्ने, अनि त्यसको निदानका लागि भौतिक शरीरको कुनै प्रवाह नगर्ने । उनी सारै त्यागी देखिएका छन । उनले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न मागहरु अघि राख्दै सरकारसँग छलफल समेत गरे तर त्यसबाट निकास ननिस्केपछि विकल्पिक बाटो अपनाउदै अनशनको आन्दोलन चलाउदै आएका हुन ।
डा. केसी २०६९ असार २१ गते देखि २०७४ साउन ९ गतेसम्म पुग्दा पाँच बर्षको अन्तरालमा ११ औं पटक अनशनमा बसेका छन । उनी निकट श्रोतका अनुसार चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनशन शृखंलाबद्ध आन्दोलन हो । यही माध्यमबट उनी माफियाकरण नामक रोगको स्थायी उपचार खोज्ने प्रयासमा रहेका छन ।
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका वरिष्ट हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर केसी ११ औँ पटक अनशनमा बसेको आज दश दिन पुगेको छ । केसी गत साउन ९ गते देखि अनशन बसेका हुन् ।
डा.गोबिन्द केसीले पहिलो पटक २०६९ असार २१ गते अनशन बस्दा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्नुपर्ने र वरिष्ठताका आधारमा डीनको नियुक्ति हुनुपर्ने लगाएका मागलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए र ११ औं पटकको अनशनमा पनि उनका मागहरु तिनै छन, सरकार सम्झौता गरेर पनि माग पुरा नगरेको उनको भनाई रहेको छ ।
आफ्ना मागहरु पुरा गराउन आन्दोलन, सडक जाम गर्ने र पुरै नेपाल बन्द गर्ने नेपाली समाजको यथार्थ संस्कारका अगाडी शान्तिपूर्वक (अनशन) आन्दोलन मार्फत आफ्ना मागहरु पुरा गराउन प्रयत्न गरेका डा. केसी विगत पाँच बर्षदेखि एक पछि अर्को चरणको अनशनकै क्रममा रहेका छन ।
उनको अनशनबाट सभ्य र शान्तिपूर्ण रुपमा राखिएको मागमा राज्यले भने खासै ध्यान दिएको देखिन्न । सुरुदेखि उठाएको माग पुरा गराउनका लागि पाँच वर्षमा ११ पटक आमरण अनशन बस्नुपर्ने र पनि त्यसमा राज्य गम्भिर नहुने कुरा सायद संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुका लागि आश्चार्यकै विषय हो । तरपनि डा. केसी अनशनबाटै आफ्नो माग पुरा गराइ छाड्ने अठोटका साथ अहिले अनशनमा रहेका छन ।
चिकित्सा क्षेत्रको विकृति हटाउने र मुलुकबाट भ्रष्टचार, अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता रोगको समुल नष्ट गर्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताउँदै आएका छन ।
सरकारले डा. केसीसँग पटक पटक माग पुरा गराउँने भन्दै सहमति पनि गरेको छ, तर उनले अनशन तोडेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको कारण उनले पटक पटक अनशन बस्ने गरेको उनी निकटहरुको भनाई रहेको छ ।
उनले ११ औं पटकको अनशनमा पनि पुरानै माग दोहोर्याएका छन, आईओएममा डीनको सिफारिश अनुसार तत्काल सहायक डीन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म त्यसो हुन नसकेको उनको भनाई रहेको छ।
विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि अनसन बस्न बाध्य भएको डा केसीले बताउदै आएका छन । आफन्त र उनका सुभचिन्तकहरुले स्वास्थ्य अवस्थामा ध्यान दिदै उनलाई अनसन नबस्न भनेर आग्रह गरेपछि उनले सरकारलाई अल्टीमेटम दिएका थिए तर सरकारले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएकाले उनले पुर्न अनशन बस्नु परेको उनी निकटहरुको भनाई रहेको छ ।
डा.गोबिन्द केसीको अनशन र माग प्रति एक्यबद्धता जनाउँदै विभिन्न संघ, संगठनहरुले समेत सरकारलाई दबावमूलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन । पछिल्लो पटक मेन्स रुम रिलोटेड एमआरआर), डिएसओन लगाएतका संस्थाहरुले उनको मागमा समर्थन गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डला चोकमा हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन ।
उनीहरु अनशनमा समेत रहेका छन । रोयल पाण्डे, दर्पण पाण्डे, निर्मल केसी, सुरेन्द्र बजगाई, फणिन्द्र कुँवर लगाएतका युवाहरु अहिले पनि अनशनमा रहेको डा. केसी समर्थक युवा यज्ञ ढकालले हरपल नेपालसँग बताएका छन ।
ढकालले डा.केसीले उठाएको मागहरु सरकारले तत्काल पुरा गर्नुपर्ने भन्दै केसीको अनशन नसकिएसम्म आफुहरुको साथ, समर्थन रहने बताए । उनले चिकित्सा क्षेत्रमा राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म आन्दोलन चलिरहने दाबी समेत गरे ।
भारतमा ५०० प्रतिशतले बढ्यो नेपाली किशोरीको तस्करी
भारत । भारतमा बेचिने नेपाली किशोरीको संख्या सन् २०१३ यता पाँच सय प्रतिशतले बढेको